Maalin: Janaayo 9, 2017
Dhacdooyinka warbaahinta bulshada ayaa ka dhacaya Ejder3200
Ifafaalaha warbaahinta bulshada ayaa ku soo idlaaday Ejder3200: ifafaalaha warbaahinta bulshada ayaa ku soo wada baxay magaalada gudaheeda iyada oo lafiirinayo “Ejder3200 Erzurum” munaasabad ay soo qaban qaabiyeen Dowlada Hoose ee Erzurum. U dir qoraallada ugu caansan isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada ee caanka ah dhacdada [More ...]
Eskişehir Naafada Muwaadinka Tram Hit: Eskişehir, qofka dhaawacmay wuxuu ku hoos jiraa taraamka waxaa lagu daweynayaa isbitaalka. Sida xogta lagu helay, muwaadin curyaan ah oo ku nool xaafada aagga mamnuucida taraafikada [More ...]
Magaalada Sivas, Guryaha TCDD waxaa loo isticmaali doonaa hawlaha ganacsiga
Sivas, TCDD Guri waxaa loo isticmaali doonaa howlaha ganacsiga: Duqa Magaalada Sivas Sami Aydin, dhaqaalaha magaalada ayagoo ka wakiil ah kororka ay sameyn doonaan intii karaankooda ah, ayuu yiri. Duqa magaalada Aydın wuxuu yiri: değişiklik Isbedel ayaa ku dhacay TCDD [More ...]
Ololaha Saldhigga Kufsiga ee La Mamnuucay Warbaahinta Bulshada
Tram to Van olole ku saabsan warbaahinta bulshada: In kasta oo taraafikada magaalada laga hadlay waxyaabo badan, dhowaan, mashruuca Tram to Van ayaa laga bilaabay warbaahinta bulshada. In kasta oo gaadiidku uu weli ka socdo Van, waxay ku baaqayaan in xalka dhibaatada ay sii wadaan dadka deggan magaalada. [More ...]
Tallaabada Maaraynta Safarada ee Pantolonz ee Mashruuca (Sawir Sawir)
Safarka Lacag-la’aanta ee Wadada Subway 16 Sannad-guurada: 16 xafladda “Kiraystaha Bilaashka ah ee Gawaarida” ayaa lagu qabtay New York, USA sannadkan. Kooxda "Hagaajinta Meelkasta" kooxdu waxay bilaabatay inay is abaabusho oo ay ku faafto dhawr iyo toban magaalo oo adduunka ah. [More ...]
Howlaha maraakiibta Magaalada ee Istanbul ayaa la joojiyay: Sababo la xiriira cimilada xun ee ka jirta magaalada Istanbul, waxaa jira baajinta adeegyada laamiga ee Wadooyinka Magaalada iyo Adeegga Basaska Istanbul (IDO). ISKU XIRASHADA MAGAALADA BOAT [More ...]
Duqa magaalada Topbaş ayaa u sheegay Tijaabada Barafka Magaalada Istanbul: Duqa magaalada Topbaş wuxuu warbixin siiyay xubnaha AKOM howlaha la xiriira dagaalka ka dhanka ah barafka ee magaalada Istanbul wuxuuna cadeeyay in wadooyinka waaween ay furan yihiin magaalada oo dhan iyo in shacabka reer Istanbul ay adeegsadaan taayirrada barafka. [More ...]
Nadiifinta iyo Dayactirka Kumbuyuutarka Mobile-ka ee Mobile-ka Wicitaanka Qalabka Badbaadada Shaqada iyo Tababarka waxaa la gadan doonaa
Sababta Barafka Sababay Sababta Barafka: Baraf culus oo ka da’ay Samsun ayaa sababay in khadka tareenka uu ka baxo wadada. Jaamacada-Tekkeköy oo u dhaxaysa 5511 tirada taraamka ayaa sababtay baraf culus oo da’ay. Samsun [More ...]
Mayd ayaa laga helay wadada tareenka ee Manisa: Meydka qofka waxaa laga helay wadada tareenka degmada Salihli ee Manisa. Sida xogta lagu helay, deegaanka Hasalan Mahallesi Tabak Creek oo jiifa sagxadaha dhulka tareenka [More ...]
Hadiyad macno leh oo loogu talagalay mukhatarta ka socota Degmooyinka Magaalada Izmir: Magaalada Izmir ee Magaalo Weynaha waxay u soo dirtay hadiyado macno leh sanadka cusub ee loo yaqaan 'mukhtars' ee degmada 19 ee ka baxsan magaalada. 908 waa sawirka Magaalada [More ...]
Xeerarka IZDAN ee tareenada TCDD
Qaban-qaabada IZBAN ee tareenka TCDD: Ka dib markii ay kordheen tirada duullimaadyada ee IZBAN, oo ay si wada-jir ah u aasaaseen Izmir Metropolitan Municipal iyo TCDD, TCDD sidoo kale waxay diyaarinaysay tareennadeeda. Dhammaan tareennada Alsancak waxaa loo jiheystay Basmane. Intaa ka dib [More ...]
Shirkadda Telefoonada ee "Yenimahalle-Sentepe" ayaa hadda la siiyay
Saraakiisha Dawladda Hoose ee Ankara, oo bilaash ah, tan iyo sannadka cusub 2014 Yenimahalle-Sentepe Cable Car, 1 TL oo loogu talagalay lacag ayaa lagu soo wareejin doonaa rakaabkii la wariyay. [More ...]
Kordhinta khidmadaha gaadiidka dadweynaha Ankara: Khidmadaha gaadiidka dadweynaha ee caasimadda dib ayaa loo hagaajiyay. Gawaarida cusub ee gaadiidka dadweynaha oo ay go'aamisay Xarunta Iskuxirka Gaadiidka ee Ankara (UKOME) Golaha Guud ayaa ansax ah laga bilaabo Janaayo 15 Axadda [More ...]